Umgaqo-nkqubo wabucala | WOWOW IiFaucets-WOWOW IiFaucets
Ikhaya / umthetho wabucala
Wowowfafaucet.com uyiqokelela njani ulwazi malunga nam?
Siqokelela ulwazi kubasebenzisi beSayithi ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, ngeenjongo zokubonelela ngamava afanelekileyo okuthengisa, anentsingiselo, kunye nawokuzonwabisa. Umzekelo, singasebenzisa iinkcukacha zakho ukuze:
* Rekhoda kwaye ngokukhawuleza uzise ulwazi olukhe walunikeza ngaphambili
* Siza kunceda ufumane ngokukhawuleza ulwazi, iimveliso kunye neenkonzo
* Yenza umxholo ofanelekileyo kuwe
* Ukwazisa ulwazi lwethu olutsha, iimveliso, kunye neenkonzo
Ukubhalisa noku-odola: Ukuze usebenzise iindawo ezithile zale ndawo okanye u-odole iimveliso, bonke abathengi kufuneka bagcwalise ifom yobhaliso kwi-Intanethi ngolwazi lomntu, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho, kwigama lakho, isini, ukuhambisa kunye nedilesi yetyala (es), umnxeba inombolo, idilesi ye-imeyile, kunye nenombolo yekhadi letyala. Ukongeza, sinokucela ilizwe ohlala kulo kunye / okanye ilizwe elisebenza umbutho wakho, ukuze sikwazi ukuthobela imithetho nemigaqo esebenzayo. Olu lwazi lusetyenziselwa ukuhlawula, uku-odola ukuthengiswa kunye nentengiso yangaphakathi kunye nokunxibelelana nawe malunga neodolo yakho kunye nendawo yethu.
Iidilesi ze-imeyile: Indawo ezininzi kwiSiza zikuvumela ukuba ungene kwidilesi ye-imeyile ngeenjongo kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho: ukubhalisa izaziso zentengiso zasimahla, ucele ukwaziswa xa iibritshi ezintsha okanye izitayile zemveliso zifika, okanye ubhalisela ileta yethu ye-imeyile. Ukongeza, nakuphi na ukuthatha inxaxheba kukhuphiswano lwentengiso oluhlelwe yiWowowfaucet.com ngokuzithandela kwaye kufuna ukubhengezwa kolwazi loqhakamshelwano olufunekayo ukwazisa abaphumeleleyo kunye namabhaso amabhaso. Singathumela amagama kunye nezixeko zabaphumeleleyo kukhuphiswano kwiSiza sethu.
Uphengululo lweMveliso: Cela idilesi ye-imeyile kunye nendawo kunye nokungenisa konke ukujongwa kwemveliso. Idilesi ye-imeyile yakho iya kugcinwa yabucala, kodwa indawo yakho iya kubonakala kwabanye abasebenzisi. Zonke ezinye iinkcukacha zakho ozikhethele ukungenisa njengenxalenye yoqwalaselo ziya kufumaneka kwezinye iindwendwe kwiSayithi.
Ngaba iWowowfaucuc.com iyisebenzisa njani inkcukacha zam?
Ukusetyenziswa kwangaphakathi: Sisebenzisa ulwazi lwakho lobuqu ukwenza i-oda yakho kwaye sikunike inkonzo yabathengi. Sinokusebenzisa ulwazi lwakho lobuqu ngaphakathi ukuqokelela ulwazi ngokubanzi malunga neendwendwe kule Sayithi, ukuphucula imixholo yeSayithi kunye nesakhiwo, ukuphucula ukufikelela kwethu, kunye nokuthengisa iinkonzo zethu kunye neemveliso.
Unxibelelwano kunye nawe: Siza kusebenzisa ulwazi lwakho lomntu siqu ukunxibelelana nawe malunga neSayithi yethu kunye nee-odolo zakho. Bonke abathengi kufuneka babonelele ngedilesi ye-imeyile ukuvumela unxibelelwano neWowowfaucet.com malunga nemiyalelo ebekiweyo. Sinokukuthumela i-imeyile yokuqinisekisa emva kokuba ubhalisile nathi kunye nezibhengezo ezinxulumene nenkonzo njengoko kufuneka (umzekelo, ukumiswa kwenkonzo okwethutyana ukulungiselela ukulungiswa.) Ungathumela nedilesi ye-imeyile yakho ukucela isaziso xa sifumana uphawu olutsha, isitayile semveliso okanye imveliso, okanye ukubhalisela ileta yethu yeendaba ye-imeyile kunye nokunikezelwa okhethekileyo. Ungazikhupha okanye ukhethe ukuphuma kwii-imeyile ezizayo nangaliphi na ixesha.